XOG: Shariif Xasan oo iska diiday qorshe oo uu u soo bandhigay Farmaajo | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA XOG: Shariif Xasan oo iska diiday qorshe oo uu u soo bandhigay...
XOG: Shariif Xasan oo iska diiday qorshe oo uu u soo bandhigay Farmaajo
Madaxweynihii hore ee maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheikh Aadan ayaa iska diiday dalab uga yimid Madaxtooyada Soomaaliya oo ku aadan inuu taageero mowqifka Dowladda Farmaajo ee dalka ay ka dhacdo doorasho Shacabka ay rabitaankooda wax ku doortaan.
Shariif Xasan oo hadda ku sugan magaalada Nairobi ayaa waxaa khadka taleefanka kula hadlay madaxweyne Farmaajo,wuxuuna u sheegay in looga baahan yahay inuu taageero la garab istaago Dowladda Nabad iyo nolol ee qorshaheeda doorashada 2021,kaasi oo ku aadan in dalkan ay ka dhacdo doorasho loo dhan yahay oo rabitaanka shacabka ku saleysan.
Madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed oo qeyb ka ah siyaasiyiinta miizaanka culus ee mucaaradsan Dowladda ayaa iska diiday dalabkaas,wuxuuna u cadeeyay madaxweynr Farmaajo in xilligan dalka u diyaarsaneyn doorasho qof iyo cod ah haddii ay dhacdana dhibaato laga dhaxli doono.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku dhegan iney Dowladdiisa awood buuxda u leedahay iney qabato doorasho qof iyo cod mudada halka sano ka yar ee taliskiisa ka haray,wuxuuna baarlamaanka ku booriyay in qorshahaasi ku raaacaan.
Siyaasiyiinta mucaaradka ayaa badi ka horyimid qorshahaas oo madaxtooyada ay gadaal ka riixeyso,waxayna sheegeen in xilligan dalka ka dhici karo doorasho qofka shacab ah uu dooran karo hoggaamiyaha uu u arko inuu hoggaamin karo.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maalintii labaad dood adag ka leh sharciga doorashooyinka oo ay soo gudbiyeen guddi uu dhawaan magacaabay guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan.